မကျွတ်မလွတ်သူရဲ့ ၀ိညာဉ်ပုံရိပ် မင်းရာဇာတို့ ရိုက်ကွင်းဓါတ်ပုံထဲပါလာခဲ့ – Alinyaung
မကျွတ်မလွတ်သူရဲ့ ၀ိညာဉ်ပုံရိပ် မင်းရာဇာတို့ ရိုက်ကွင်းဓါတ်ပုံထဲပါလာခဲ့
February 26, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM အနုပညာရပ်ဝန်း 0
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေကို တွေ့ကြုံဖူးသူတိုင်းက မကျွတ်မလွတ်ဝိညာဉ်တွေ တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ကြပေမယ့် အချို့ ကတော့ မယုံမကြည်ဖြစ်နေကြဆဲပါပဲ ။ ခုလည်း အငြင်းပွားစရာ ပုံရိပ်တစ်ခုကို သရုပ်ဆောင်မင်းရာဇာက ပြသလိုက်တာပါ ။ သူတို့ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရိုက်ကွင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးရာမှာ ပါဝင်လာတဲ့ လက်ပြတ်ကြီးတစ်ဖက်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ပြသရင်း
” ထူးဆန်းသော အဖြစ်ပြက်….ဒီနေ့ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး
မောင်းမကန်ကမ်းခြေမှာ ဇာတ်ကားရိုက်နေရင်း ပင်လယ်ထဲမှထူးဆန်းတဲ့ လက်ကြီးပေါ်လာ။တပည့်မှမှတ်တမ်းးဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်ပေးရင်း Camera effect မဟုတ်ပြတ်သားစွာပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
နယ်ခံများမှပြောကြသည်မှာ Y8 စစ်လေယဉ်ပျက်ကြသောကျောက်နီမှော်ကမ်းခြေနားမှဖြစ်သည်လို့ပြောကြသည်။မကျွတ်မလွတ်များရှိခဲ့ပါက အမြန်ဆုံးကျွတ်လွတ်ကြပါစေဗျာ။24.2.2018 နောက်တယ်မထင်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားပေးပါလားသူငယ်ချင်းတို့?????????????????????? ” လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယ် ။
ုပုံတွေထဲမှာတော့ လက်ပြတ်ကြီးတစ်ခုရဲ့ ပုံရိပ်ကိုထင်းနေအောင် အားလုံးမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ ။ ယုံကြည်ကြသူများက အမျှဝေဖို့ပြောကြသလို မယုံကြည်သူများကလည်း Camera Effect လိုပြောနေကြပေမယ့် မင်းရာဇာကတော့ တကယ့်အဖြစ်ပါလို့ဆိုပြီး သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံး ကြက်သီးများတောင်ထကုန်ကြရတယ်လို့ ထပ်မံပြောပြထားပါတယ် ။ မင်းသမီးဖူးစုံကလဲ တကယ်လား လို့လာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီး မင်းရာဇာက ” ဟုတ်တယ်အမ တကယ် အားလုံး camera အကြောင်းနားလည်တဲ့သူကြည့်ဘဲ ” လို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာမို့ နောက်ပြောင်နေတာမဟုတ်ဘဲ အတည်ပြောနေတယ်ဆိုတာတော့ သေချာသွားခဲ့ပါတယ် ။ ပရိတ်သတ်တို့ရော ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဟင် ။
သတင်းအရင်းမြစ် : Min Yar Zar
သဘာဝလှနျဖွဈရပျတှကေို တှကွေုံ့ဖူးသူတိုငျးက မကြှတျမလှတျဝိညာဉျတှေ တကယျရှိတယျဆိုတာ ယုံကွညျကွပမေယျ့ အခြို့ ကတော့ မယုံမကွညျဖွဈနကွေဆဲပါပဲ ။ ခုလညျး အငွငျးပှားစရာ ပုံရိပျတဈခုကို သရုပျဆောငျမငျးရာဇာက ပွသလိုကျတာပါ ။ သူတို့ရိုကျကူးနတေဲ့ ရိုကျကှငျးရဲ့ ပုံရိပျတှကေို ရိုကျကူးရာမှာ ပါဝငျလာတဲ့ လကျပွတျကွီးတဈဖကျရဲ့ ပုံရိပျကို ပွသရငျး
” ထူးဆနျးသော အဖွဈပွကျ….ဒီနေ့ နခေ့ငျးကွောငျတောငျကွီး
မောငျးမကနျကမျးခွမှော ဇာတျကားရိုကျနရေငျး ပငျလယျထဲမှထူးဆနျးတဲ့ လကျကွီးပျေါလာ။တပညျ့မှမှတျတမျးးဓာတျပုံလိုကျရိုကျပေးရငျး Camera effect မဟုတျပွတျသားစှာပျေါလာခွငျးဖွဈသညျ။
နယျခံမြားမှပွောကွသညျမှာ Y8 စဈလယေဉျပကျြကွသောကြောကျနီမှျောကမျးခွနေားမှဖွဈသညျလို့ပွောကွသညျ။မကြှတျမလှတျမြားရှိခဲ့ပါက အမွနျဆုံးကြှတျလှတျကွပါစဗြော။24.2.2018 နောကျတယျမထငျပါနဲ့ ဘာဖွဈနိုငျမလဲဆိုတာ စဉျးစားပေးပါလားသူငယျခငျြးတို့?????????????????????? ” လို့သူကဆိုထားခဲ့ပါတယျ ။
ုပုံတှထေဲမှာတော့ လကျပွတျကွီးတဈခုရဲ့ ပုံရိပျကိုထငျးနအေောငျ အားလုံးမွငျတှနေို့ငျမှာပါ ။ ယုံကွညျကွသူမြားက အမြှဝဖေို့ပွောကွသလို မယုံကွညျသူမြားကလညျး Camera Effect လိုပွောနကွေပမေယျ့ မငျးရာဇာကတော့ တကယျ့အဖွဈပါလို့ဆိုပွီး သူတို့တဈဖှဲ့လုံး ကွကျသီးမြားတောငျထကုနျကွရတယျလို့ ထပျမံပွောပွထားပါတယျ ။ မငျးသမီးဖူးစုံကလဲ တကယျလား လို့လာရောကျမေးမွနျးခဲ့ပွီး မငျးရာဇာက ” ဟုတျတယျအမ တကယျ အားလုံး camera အကွောငျးနားလညျတဲ့သူကွညျ့ဘဲ ” လို့ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့တာမို့ နောကျပွောငျနတောမဟုတျဘဲ အတညျပွောနတေယျဆိုတာတော့ သခြောသှားခဲ့ပါတယျ ။ ပရိတျသတျတို့ရော ဘယျလိုမွငျကွလဲဟငျ ။
သတငျးအရငျးမွဈ : Min Yar Zar
ပညာမတတ်ပါ သို့သော့့်